နှနေပေူပူအောကျက ကိုကျနတေဲ့ ခေါငျးတှေ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
?နှနေပေူပူအောကျက ကိုကျနတေဲ့ ခေါငျးတှေ?
တဖွညျးဖွညျး ပကျြစီးယိုယှငျးလာတဲ့ တောတောငျ ရမွေေ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ နောကျမှာ ရာသီဥတုဖောကျပွနျမှုတှကေ သစ်စာရှိရှိလိုကျလာတယျ။ သီခငျြးထဲကလို “အလှနျအေးတဲ့ရာသီ..အလှနျခမျြးတဲ့ရာသီ” ဆိုပွီး ဆောငျးပီပီ မအေးခဲ့ပမေဲ့ နှကေတော့ မုနျးစရာကောငျးလောကျအောငျကို လိုတာထကျပို တာဝနျကပြွေတယျ။ ပူလိုကျတဲ့ အပူရှိနျက ခေါငျးပျေါမီးဖိုတဈခုတငျပွီး ခြှေးထုတျခနျးထဲ ထိုငျနရေသလိုမြိုး။ ဒီတော့လညျး နဂိုခေါငျးမကိုကျတတျတဲ့ လူတှတေောငျ Summer Headache (Heat Headache) လို့ ချေါတဲ့ အပူကွောငျ့ကိုကျတဲ့ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာတှေ ခံစားလာရတယျ။ နဂို ခေါငျးမကွာခဏ ကိုကျတတျသူတှေ၊ ခေါငျးတခွမျးကိုကျတဲ့ Migraine ရောဂါ ရှိသူတှမှော ဆိုစရာမရှိတော့။
အဓိကအားဖွငျ့ ပတျဝနျးကငျြအပူခြိနျ မွငျ့တကျလာရငျ ဖွဈပါတယျ။ စိုထိုငျးဆမြားလာရငျ ဖွဈပါတယျ။ လဖေိအားကလြာရငျလညျး ဖွဈပါတယျ။ နပေူတိုကျရိုကျမိသှားရငျ ပိုဖွဈပါတယျ။ အပူခြိနျကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျက Serotonin ဟျောမုနျးပမာဏ အပွောငျးအလဲဖွဈသှားတာကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ရဓောတျခနျးခွောကျလာလို့လညျး ကိုကျနိုငျသလို အပူဒဏျကွောငျ့ အစားအသောကျပကျြလာတဲ့အခါတှမှောလညျး အခြိုဓာတျကဆြငျးမှုကွောငျ့ ကိုကျတတျပါတယျ။
? ဘယျလိုကိုကျ ??
နားထငျနှဈဘကျကနေ တဆဈဆဈနဲ့ ကိုကျနတေတျသလို နောကျစဘေ့ကျကနလေညျး ထိုးကိုကျနတေတျပါတယျ။ အလငျးစူးစူးကွညျ့မရတာမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတဲ့ Migraine ရောဂါအခံရှိသူတှမှောလညျး အပူကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျတာ ပွနျပျေါလာနိုငျပွီး ခေါငျးတဈခွမျးတညျးက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုကျနတေတျသလို ပြို့ခငျြအနျခငျြတာမြိုးနဲ့လညျး တှဲဖွဈတတျပါတယျ။
ခေါငျးကိုကျတာ တဈခုတညျးကတော့ အန်တရာယျမဟုတျပမေဲ့ အပူလှနျကဲတဲ့ heat exhaustion ၊ အပူရှပျတဲ့ heat stroke စတဲ့ အခွအနမြေိုးဆိုရငျတော့ တျောတျောလေး အန်တရာယျရှိပါတယျ။
ခြှေးအရမျးထှကျ…ရအေရမျးဆာရာကနေ… ခွလေကျမသယျခငျြ…အကွောတှကေပျ..မူးဝေ…နုနျးခှလောပွီဆိုရငျ ဆေးရုံမွနျမွနျသှားပါ။ ဒါ အပူလှနျတဲ့ heat exhaustion အဆငျ့ပါ။
ပွီးရငျ ခြှေးမထှကျနိုငျတော့ဘဲ တဈကိုယျလုံးပူခွဈ ခွောကျသှလေ့ာတဲ့ heat stroke ဆိုတဲ့ အပူရှပျတဲ့ အဆငျ့ရောကျပွီဆို အသကျအန်တရာယျအထိရှိပါတယျ။
? ဘာတှကွေောငျ့ ခေါငျးကိုကျပိုဆိုးတတျလဲ ??
– အအီစာ အစိမျ့စာတှေ စားမိရငျ..ယမျးစိမျးပါတဲ့ အစားအသောကျမြိုးတှစေားမိရငျ
– အရကျ/ ဘီယာသောကျမိရငျ
? ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ??
– မထှကျမဖွဈ နပေူထဲထှကျရတော့မယျဆို လုံလုံခွုံခွုံ ပှပှခြောငျခြောငျဝတျပါ။
– ထီး၊ ဦးထုပျ ဆောငျးပါ။
– ရဘေူး/ ဓာတျဆားရညျဘူး ဆောငျပါ။
? ဘယျလို သကျသာအောငျလုပျမလဲ??
အပူကွောငျ့ ကိုကျတဲ့ခေါငျးကို အေးခမျြးတဲ့နရော တဈခုခုကို ပို့ပေးရမှာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ပူလိုကျအေးလိုကျ ဖွဈရငျတော့ ပိုကိုကျတတျပါတယျ။ ခုနကပွောခဲ့တဲ့ Heat exhaustion နဲ့ Heat stroke အခွအေနမြေိုးကလှဲရငျ Acetaminophen လို့ချေါပွီး Paracetamol (ပါရာစီတမောလျ) လို့ လူသိမြားတဲ့ ခေါငျးကိုကျဖြားနာပြောကျဆေးတှေ သောကျလို့ရပါတယျ။ ရမြေားမြားသောကျဖို့လိုပါတယျ။ အသီးဖြျောရညျတှလေညျး သောကျပေးသငျ့သလို ဒီနှရောသီအပူဒဏျကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာတှနေဲ့ အပူရှပျမဲ့ အန်တရာယျကိုပါ ကာကှယျဖို့အတှကျ ဓာတျဆားရညျကတော့ မရှိမဖွဈပါဘဲ။
မွနျမွနျ မိုးတှငျးရောကျ ခေါငျးကိုကျတှပြေောကျကွပါစေ..။
?နွေနေပူပူအောက်က ကိုက်နေတဲ့ ခေါင်းတွေ?
တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့ တောတောင် ရေမြေ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ နောက်မှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေက သစ္စာရှိရှိလိုက်လာတယ်။ သီချင်းထဲကလို “အလွန်အေးတဲ့ရာသီ..အလွန်ချမ်းတဲ့ရာသီ” ဆိုပြီး ဆောင်းပီပီ မအေးခဲ့ပေမဲ့ နွေကတော့ မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကို လိုတာထက်ပို တာဝန်ကျေပြတယ်။ ပူလိုက်တဲ့ အပူရှိန်က ခေါင်းပေါ်မီးဖိုတစ်ခုတင်ပြီး ချွေးထုတ်ခန်းထဲ ထိုင်နေရသလိုမျိုး။ ဒီတော့လည်း နဂိုခေါင်းမကိုက်တတ်တဲ့ လူတွေတောင် Summer Headache (Heat Headache) လို့ ခေါ်တဲ့ အပူကြောင့်ကိုက်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတွေ ခံစားလာရတယ်။ နဂို ခေါင်းမကြာခဏ ကိုက်တတ်သူတွေ၊ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တဲ့ Migraine ရောဂါ ရှိသူတွေမှာ ဆိုစရာမရှိတော့။
အဓိကအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် မြင့်တက်လာရင် ဖြစ်ပါတယ်။ စိုထိုင်းဆများလာရင် ဖြစ်ပါတယ်။ လေဖိအားကျလာရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေပူတိုက်ရိုက်မိသွားရင် ပိုဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က Serotonin ဟော်မုန်းပမာဏ အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်လာလို့လည်း ကိုက်နိုင်သလို အပူဒဏ်ကြောင့် အစားအသောက်ပျက်လာတဲ့အခါတွေမှာလည်း အချိုဓာတ်ကျဆင်းမှုကြောင့် ကိုက်တတ်ပါတယ်။
? ဘယ်လိုကိုက် ??
နားထင်နှစ်ဘက်ကနေ တဆစ်ဆစ်နဲ့ ကိုက်နေတတ်သလို နောက်စေ့ဘက်ကနေလည်း ထိုးကိုက်နေတတ်ပါတယ်။ အလင်းစူးစူးကြည့်မရတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့ Migraine ရောဂါအခံရှိသူတွေမှာလည်း အပူကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာ ပြန်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ခေါင်းတစ်ခြမ်းတည်းက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုက်နေတတ်သလို ပျို့ချင်အန်ချင်တာမျိုးနဲ့လည်း တွဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်တာ တစ်ခုတည်းကတော့ အန္တရာယ်မဟုတ်ပေမဲ့ အပူလွန်ကဲတဲ့ heat exhaustion ၊ အပူရှပ်တဲ့ heat stroke စတဲ့ အခြအနေမျိုးဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ချွေးအရမ်းထွက်…ရေအရမ်းဆာရာကနေ… ခြေလက်မသယ်ချင်…အကြောတွေကပ်..မူးဝေ…နုန်းခွေလာပြီဆိုရင် ဆေးရုံမြန်မြန်သွားပါ။ ဒါ အပူလွန်တဲ့ heat exhaustion အဆင့်ပါ။
ပြီးရင် ချွေးမထွက်နိုင်တော့ဘဲ တစ်ကိုယ်လုံးပူခြစ် ခြောက်သွေ့လာတဲ့ heat stroke ဆိုတဲ့ အပူရှပ်တဲ့ အဆင့်ရောက်ပြီဆို အသက်အန္တရာယ်အထိရှိပါတယ်။
? ဘာတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်ပိုဆိုးတတ်လဲ ??
– အအီစာ အစိမ့်စာတွေ စားမိရင်..ယမ်းစိမ်းပါတဲ့ အစားအသောက်မျိုးတွေစားမိရင်
– အရက်/ ဘီယာသောက်မိရင်
? ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ??
– မထွက်မဖြစ် နေပူထဲထွက်ရတော့မယ်ဆို လုံလုံခြုံခြုံ ပွပွချောင်ချောင်ဝတ်ပါ။
– ထီး၊ ဦးထုပ် ဆောင်းပါ။
– ရေဘူး/ ဓာတ်ဆားရည်ဘူး ဆောင်ပါ။
? ဘယ်လို သက်သာအောင်လုပ်မလဲ??
အပူကြောင့် ကိုက်တဲ့ခေါင်းကို အေးချမ်းတဲ့နေရာ တစ်ခုခုကို ပို့ပေးရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပူလိုက်အေးလိုက် ဖြစ်ရင်တော့ ပိုကိုက်တတ်ပါတယ်။ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Heat exhaustion နဲ့ Heat stroke အခြေအနေမျိုးကလွဲရင် Acetaminophen လို့ခေါ်ပြီး Paracetamol (ပါရာစီတမောလ်) လို့ လူသိများတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဖျားနာပျောက်ဆေးတွေ သောက်လို့ရပါတယ်။ ရေများများသောက်ဖို့လိုပါတယ်။ အသီးဖျော်ရည်တွေလည်း သောက်ပေးသင့်သလို ဒီနွေရာသီအပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတွေနဲ့ အပူရှပ်မဲ့ အန္တရာယ်ကိုပါ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဓာတ်ဆားရည်ကတော့ မရှိမဖြစ်ပါဘဲ။
မြန်မြန် မိုးတွင်းရောက် ခေါင်းကိုက်တွေပျောက်ကြပါစေ..။